Kushanyira Angkor Tembere muCambodia | Absolut Kufamba
Kushanyira tembere dzeAngkor muCambodia
Alberto Makumbo | | vamwe
Patinofunga nezvazvo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuvaImwe yenzvimbo dzekutanga dzinouya mupfungwa, pasina mubvunzo, iyo yakaoma yakaumbwa nematemberi eAngkor muCambodia. Nzvimbo huru kwazvo yezvinamato munyika Ino inzvimbo yetsika uye yekufungidzira yanga ichinyengedza vese vashanyi kwemakore avo vanodonhedzwa nehofori yeCambodian kana nyika iri pedyo yeVietnam yakanaka yekuwedzera. Uri kuuya nesu kuti tizive iyo Angkor tembere muCambodia?
1 Ipfupi nhoroondo yetembere dzeAngkor
2 Kushanyira tembere dzeAngkor
3 Ruzivo pakushanyira tembere dzeAngkor
Ipfupi nhoroondo yetembere dzeAngkor
MuCambodia yanhasi kune dunhu iro raitova makore zviuru zviviri zvakapfuura raigara nevanhu vemarudzi akasiyana. Zvisinei, zvaisazove kusvika muzana ramakore rechisere AD apo iyo mambo Jayavarman II, mutungamiri wepamusoro-soro wehumambo hweKhmer, aive pamusoro pekudzikinura vanhu vese venzvimbo iyi vachigadzira humambo hwakazara hwakadaidzwa Devaraja (kana mwari tembere), ode yekunamatwa kwamambo iye.
Jayavarman II akatanga nekuvaka iyo Preah Ko tembere, yakavakwa kuti ikudze mambo. Makore gare gare, Javayarman ini ndaizotungamira mukugadzira tembere Bakong, uyo unove iwo mufananidzo wakanaka weakavakwa ayo matembere eAngkor parizvino, ane dombo guru, iro rinokosha reAngkor Wat, raizorairwa kuvakwa naMambo Yasovarman muzana ramakore rechiXNUMX. Nguva yakabatana ne pesvedzero yechiBuddha nechiHinduZvitendero zvakawedzerwa, kusvika padanho rakakura, nevatengesi veIndia vaishandisa Angkor senzvimbo yekufambisa nekuzorora kusvika kupera kwemwaka wemvura.
Kunyangwe nguva yekubwinya kwetembere yeAngkor yakagara pakati pezana ramakore rechisere nerechigumi nemashanu, kurwiswa kunogara kuripo kwemaMongolia kubva kuchamhembe nevaSiamese kubva kumaodzanyemba kwakatungamira ku siya tembere muna 1594, Ri Riep iri iro rakazotevera guta reCambodian. Ichokwadi chisina kumbobvumikiswa, sezvo tembere dzakasiiwa munyasha dzesango dzisina kukundwa nemaSiamese kusvika, mazana emakore gare gare, nyanzvi yezvezvisikwa yeFrance yakawana ino "nyika yakarasika" panguva yerwendo rwekutsvaga butterflies.
Nezvakawanda kupfuura 900 zviyeuchidzo zvakaverengwa, the angkor tembere Vakaramba vakasiiwa kwemazana emakore, vari Angkor Wat chete iyo yakaramba ichichengetedzwa nekugara nemamonki echiBuddha munzvimbo iyi nanhasi.
Inofungidzirwa chivakwa chikuru cheHindu mupasi uye chikuru Cambodia nyika icon, iyo Angkor tata yakasarudzwa UNESCO World Heritage Saiti muna 1992. Chiumbwa chekuvaka chakashanduka chikava chimwe chezvirevo zvakakura zvechiitiko chero chipi muSoutheast Asia uye kunyanya yenyika yeCambodian inotenderera nenzvimbo ino yetembere dzakakundwa neficus, vanamwarikadzi vanonyemwerera uye nevamwe ve kunyura kwezuva kwakanyanya kwazvo munyika.
Iwe ungade here kuongorora mukati merunako rweAngkor tembere?
Kushanyira tembere dzeAngkor
Iyo Angkor tata ndiyo imwe yeakakura kwazvo pasirese, ndosaka kushanya kuchizogara zvichienderana nenguva yaunofanira kushanyira nzvimbo yese. Kana mune yako kesi uchida kumhanyisa mangwanani kana zuva rekushanyira nzvimbo inomiririra, aya ndiwo inonyanya kukosha nzvimbo muAngkor kuti haugone kupotsa:
Iyo yakakosha uye inonyanya kutorwa tembere muAngkor Inozorora munzvimbo yepakati, ingori makiromita 5.5 kuchamhembe kweSiemp Reip, guta rakanakisa kushandisa senzvimbo yekuziva dunhu. Akafuridzirwa neGomo reMeru ngano dzeTibet uye yakavakwa mukuremekedza mwari wechiHindu Vishnu, Angkor (guta guru muchiSanskrit) Wat (tembere mumutauro mumwe chete) akaurayiwa nevekuMadokero pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX, achiva chikamu chepakati chekudzidza cheFrench School yeFar East, inotarisira kuongorora nekuvakazve kwe zviyeuchidzo zveAsia zveIndochina zvakapambwa neveFrance. Inzvimbo inonakidza inoumbwa neshongwe nhatu dzinozivikanwa dzinokukoka kuti urasike pakati penzira dzakachengetedzwa nemamongi echiBuddha, dzimba dzekunze dzakapindirwa nesango kana kuvira kwezuva kunowana pano imwe yenzvimbo dzakanakisa pasi pano.
Inofungidzirwa se guta rekare ramambo rakasimbiswaAngkor Thom ndeimwe yemahombekombe makuru mukati meAngkor pachayo nekuwedzera kusvika 9 mativi emamita. Nzvimbo yakanaka yekunakirwa neshumba dzinoyambuka mukova wePhimeanakas, iyo inoshamisa Terrace yeNzou asi, kunyanya, Bayon, nzvimbo yetembere inozivikanwa neayo 54 shongwe, pakati payo inomira imwe umo Buddha anoonekwa pamativi mana, kana kunyanya kumusoro 200 zvivezwa zvinonyemwerera idzo dzinodhonzwa nemakona ayo.
Inozivikanwa se Tembere Yemidzi, Ta Prohm inopedzisa hutatu hweAngkor, ichive imwe yenzvimbo dzinotorwa mifananidzo munzvimbo iyi. Icho chikonzero hachisi chimwe kunze kwechimiro chayo chetembere yakasiyiwa pakati pesango, izvo zvakatungamira mahunyanzvi eFrance Chikoro kuti vaichengete mune imwechete mamiriro kwavakaiwana. Izvi zvinoguma kuvepo kwe mionde mikuru inomhanya nemumamwe ematembere kugadzira rwendo runonakidza.
Kana iwe uine imwe nguva yekushanyira tembere, unogona kusarudza a nzira inosanganisira Preah Khan, iyo Neal Pean, inozivikanwa nezvenyoka dzayo dzakavezwa, kana Tembere yeVakadzi, inozivikanwawo seBanteasy Srei, yakati kure kure neCentral Angkor.
Ruzivo pakushanyira tembere dzeAngkor
Nguva yeAngkor Inotongwa nekufamba kwezuva, saka tembere dzinovhurwa na5 mangwanani uye dzinovhara na17: 00 dzemasikati. Iyo purogiramu inobvumidza mushanyi kuenda chinhu chekutanga mangwanani kubva kuguta riri padyo reSi Riep uye kunakirwa kusurukirwa kweiyo yakaoma yekubatana nekubuda kwezuva. Zvikasadaro, kuvira kwezuva inogara iri nguva yakanyanya kushuvira yekutora mufananidzo.
Chipfeko kana uchipinda muAngkor chinofanira kusiya mapfudzi asina kupfeka nemabvi, saka zvinokurudzirwa kuenda zvakavharwa sezvinobvira.
Nezve mutengo wematikiti, aya anogona kutengwa zvichienderana nenguva yaunoda kunakidzwa neAngkor pamitengo yakasiyana. Matikiti ezuva rimwe chete anodhura madhora makumi matatu nemasere, mazuva maviri nemaviri mazuva makumi matanhatu nemaviri emadhora 1 asi anodhura, svondo rimwe chete anosvika madhora makumi manomwe nemaviri.
Nzira yakanakisa yekunakirwa netembere dzeAngkor zvinoenderana nemamiriro ekunze.
Iwe ungade here kuwana ichi chinoshamisa chiCambodian?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kushanyira tembere dzeAngkor muCambodia
Chii chaungaona muSantillana del Mar
Chii chekuona muSofia